Qalabka Qodista Xeebta | Dib u Qabashada Dhulka | Xakamaynta Fatahaada
Badbaadinta iyo dib u soo celinta xeebaha iyo dib u soo celinta dhulka ayaa muhiim u ah ilaalinta ilaha dabiiciga ah.
Abuuritaanka dhul cusub iyo soo celinta dhulka daadadka ayaa caan ku ah adduunka oo dhan horumarinta guryaha iyo dib u dayactirka aagagga burburay. Roobabkii Ellicott waxaa loo isticmaalaa in lagu soo tuuro ciid iyo biyaha xeebta dib ugu noqoshada meeshii ay markii hore ka yimaadeen.
Ellicott waxay bixisaa dhowr moodeel biyood oo caan ku ah mashaariicda qodista xeebta. Kooxdayada iibinta aqoonta leh ayaa kula shaqeyn doonta si loo ogaado qalabka sida ugu fiican ugu habboon baahidaada mashruuca.
Soo celinta Xeebta
Ma jirto wax ka celinaya dabeecadda hooyo inay wax ka cunto xeebaheenna meeraheeda iyo xeebteeda. Dhaqan ahaan nabaad-guurka xeebta wuxuu ku yimaadaa wareegga isdaba-joogga, socodka, hirarka, iyo cimilada oo xumaata. Xeebaha lagu soo celiyay qashin qubka waxaa loogu talagalay inay ka ilaaliso bulshada maxalliga ah waxyeelada duufaanka ayna ilaaliso booska madadaalada madadaalada.
Doonyahayaga duulimaadyada waxaa loo adeegsadaa inay gacan ka geystaan ​​xakameynta qotoda dheer iyo dib u soo celinta xeebaha bulshada adduunka oo dhan meelaha ay ka mid yihiin Fuller Street Beach ee Edgartown, Massachusetts (USA) iyo San Antonio River Inlet, Buenaventura, Kolombiya.
Dib u Soocelinta Dhulka iyo Dhismaha Jasiiradda
Maaddaama suuqyada adduunku ay sii kordhayaan oo ay sii fidayaan dad aad u tiro badan ayaa u hayaamaya oo booqanaya meelaha u dhow xeebta sida Apollo Bay, Melbourne, Australia, iyo Xeebta Matira, Bora Bora waxay abuureysaa baahi weyn oo loo qabo mashaariic dib u soo celinta dhulka.
Habka qodista dhulka dib u soo celinta wuxuu ka kooban yahay soo saarista ciid, dhoobo, ama dhagax ka soo baxa dabaqa badweynta kadibna canaasiirta ayaa la dhigayaa si loo sameeyo dhul cusub meel kale. Taariikhda Ellicott oo dhan, waxaan ku lug lahaan jirnay mashaariic ballaaran oo dib u soo celinta dhulka oo gacan ka geystey xoojinta Port of Los Angeles, California (USA) iyo Port Said, Cario, Egypt.
Xaafadaha ku teedsan webiga ayaa u nugul daadadka sanadlaha ah xilliyada roobka. Haddii wabiga ama marin biyoodka aan si sax ah loo maareynin, carrada, ciidda, iyo qashinka ayaa si tartiib tartiib ah u soo kici doona taasoo sababi doonta in culeys la saaro. Markay dhacdo muhiim ah oo roob ahi dhacdo, cidhiidhku wuxuu xaddidayaa webi, kanaal, ama marin biyoodyo, awood u siinta biyo dabiici ah oo qulqulaya oo keenaya heerarka biyaha inay sare u kacaan oo daadadku dhacaan.
Mashaariicda qodista wabiga iyo kahortagga daadadka waxay ka shaqeeyaan sidii loo ilaalin lahaa qoto dheerida kanaalka, kuwa kalena waxaa loo adeegsadaa yareynta daadadka. Qaar ka mid ah mashruucyada la xiriira daadka ayaa u baahan in laga qaado waxyaabaha wasakheysan.
370 Dragon Dredge oo Dhameystiray Mashruuca Soo celinta Koonfur Galbeed Benin